Nagarik Shukrabar - पहिले हाईहाई, पछि ‘हाय’
शुक्रबार, २२ असार २०७५, ०४ : ३६ | शुक्रवार
पल शाहको बुई चढेर रजतपटमा टिकिरहेकी छन्, आँचल शर्मा । पहिलो फिल्म ‘नाइँ नभन्नू ल ४’ खेल्दा नै पलसँग टाँका भिडाएकी आँचल उनकै सहारामा यहाँ छिन्भन्दा फरक पर्दैन । तिनै आँचललाई सफलताले मान्छेलाई अन्धो बनाउँछ भन्ने कुरा चरितार्थ हुन थालेको छ ।
केही दिनअघिसम्म तिनै आँचल हुन्, जो ‘शत्रु गते’ र यसका निर्देशकको तारिफ गरेर थाक्दिनथिन् । रिलिजको समयमा पनि आफूले वरिष्ठको हाराहारीमा अभिनय गरेको भनेर फुइँ लगाइरहेकी थिइन् । उनलाई लागेको थियो होला, उनले अभिनयमा ठूलै छलाङ मारिन् । तर आफूलाई मात्र लागेर के गर्नु ?
अरुलाई पनि लाग्नु प¥यो नि ? फलतः उनलाई कुनै पनि गतिलो ब्यानरले फिल्म अफर गरेको छैन । यसपछि त उनलाई लागेको छ, ‘शत्रु गते’ हिट भएर पनि खास फाइदा भएन । त्यसपछि त उनले धेरै कलाकारको भिडमा फिल्म खेल्नु नै गलत भएको निष्कर्ष निकालेकी छन् । यसैलाई भन्छन्, पहिले हाईहाई पछि हाय !